Cinga abalinganiswa beDisney njengeNene nguJirka Väätäinen | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJirka Väätäinen ngumzobi onetalente ozimeleyo kunye nomzobi wegraphic owazalelwa eHelsinki, eFinland. Okwangoku ikomkhulu layo liseMelbourne, e-Australia. Uyifumene inqanaba lesidanga sokuqala 'Uyilo loMzobo weSikolo seYunivesithi yobuGcisa eBournemouth'. UJirka unomdla kuzo zonke iintlobo zokubonakalayo: Uyilo lwegraphic, ukufota, ifashoni, ubugcisa bedijithali, umzekeliso.
Uthando lwayo lokuqala yayiyiNkosana uEric evela 'kwi-Little Mermaid'. Nangona engadingi kuncokola kakhulu noAriel ukuba athandane naye. Ngoku umculi uJirka Väätäinen uye wacinga ngento uEric kunye neenkosana zakhe zeDisney, indlela ababeya kubonakala ngayo njengabantu bokwenene, kwaye iziphumo zombini zine-nostalgic kwaye zishushu ngokudideka.
Väätäinen uthi njengoko ebhengeza kwi 'Cosmopolitan', ukuba umbono wokuphinda ucinge abalinganiswa be Disney Kwaphuma kungabikho ndawo ngo-2011, xa wayezibuza ukuba u-Ursula ovela kwi-Little Mermaid uza kujongeka njani ebomini bokwenyani.
Emva kokukhula kunye neqela lala manqaku, imvakalelo yokuba nethemba yenza ukuba ibeyiprojekthi yobuqu, enomdla, kunye neyonwabisayo yokuyihlola kunye nokuqhubeka.
Kule mizekeliso wazama ukuyigcina kuyinyani kwiimpawu zomlinganiswa kwaye kwangaxeshanye zibenza bajonge ngakumbi. Wayephefumlelwe ziifoto zobomi bokwenyani, izinto ezidityanisiweyo zeFotohop, kwaye wagqiba ngombala wedijithali ukunika imveliso egqityiweyo.
Ukuba ukhe wazibuza ukuba ingaba iinkosana zeDisney zazinokubonakala njani ebomini bokwenyani. UJirka Väätäinen, umzobi ngokuqinisekileyo wawuphendula ngokuqinisekileyo lo mbuzo ngothotho lwemizekelo yokwenyani yobomi I-Disney iinkosana kunye namakhosazana.
Nabani na one uthando lobuntwana ngezi nkosana ngokuqinisekileyo uya kuyithanda, kodwa nokuba awunomdla wokuyibona ukuba ingabonakala injani na ngokwasebukhosini. Väätäinen wahlala enyanisekile kubalinganiswa bakhe bokuqala ngelixa eqinisekisa ukuba bajongeka beyinyani kwaye bekholelekile. Emva koko ndikushiya igalari emangalisayo Ngomsebenzi wabo, qikelela ukuba ngoobani abalinganiswa beDisney.
Fuente | qokiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Cinga kwakhona abalinganiswa beDisney njengeNene nguJirka Väätäinen